Raha toa ianao ka mbola nahita ireo Epic ady ao amin'ny filma avy eo fa hanaiky izany no hetsika tsara indrindra sarimihetsika sokajy. Legend Lore dia ny slot lalao mifototra amin'ny ady toy izany filaharany. Ny ady eto dia eo amin'ny elves, goblins sy orcs sy ny endri-javatra isan-karazany slot mahaliana tarehin-tsoratra toy ny tandindona. Zavatra tsy miraingiraingy azon'ny dimy UK slots finday lalao manana 25 Bet-dalana, izay ferana amin'ny reels. Misy ady mafy mozika eo aoriana izay manome azo mihevitra ny lalao. The slot ho ambony ny resahana be tendrombohitra sy lapa, ary afaka mahita ny zavaboary manana elatra amin'ny fandatsahan-drà eo amin'ny volony. Ny hilokana dia manomboka amin'ny 25p fa Max no nametraka ihany amin'ny £ 62,5 ny kofehy ireny.
Momba ny developer ny Legend Lore
Zavatra tsy miorina mafy ady lava slot lalao dia novokarin'ny 1×2 lalao (NYX). Izy ireo ny mpitarika iray amin'ireo orinasa lalao amin'ny manan-karena traikefa eo amin'ny famoronana lalao ho an'ny isan-karazany amin'ny aterineto slot Casino toerana. Ny lalao dia playable amin'ny aterineto isan-karazany afaka fitaovana toy ny finday sy ny takela-bato.
izany UK slots finday lalao manasongadina mariky ny tarehin-tsoratra isan-karazany ao anatin'izany ny mahery fo efatra elvish. Izy ireo Arior, ara-dalàna, Derec sy Caldor miaraka amin'ny marika ny goblin, tsipìka & arrow, fiadiana volamena sy ny biby manana elatra. Derec dia famantarana ny ho mahery fo izay mandoa ny ambony indrindra ny 500x tsatòka dimy teo amin'ny fipetrahana karazany manerana mavitrika payline. Misy endri-javatra miavaka telo fanehoana an'ohatra mifanitsy amin'ny anarana mpanjaka Elvish Aliendor, andriambavy Silvertawn sy orc atao hoe Bonecrack.
Bonecrack Bonus: Rehefa ny mariky ny orc Hita in-telo na mihoatra mandritra ny kofehy ireny, ianao no nalaina an-tombony manodidina. Eto kisendrasendra mahery fo toa hiatrika ny orc amin'ny swordfight. Rehefa tapitra ny ny manodidina, ianao dia nahazo valisoa mifototra amin'ny fomba tsara ny mahery fo dia niady.
Wild Bonus Feature: Ny mpiady andriambavy, Silvertawn no mariky ny bibidia ity UK slots finday lalao. Izany manolo tena ratsy ny sary famantarana afa-tsy ny taolana sy ny mpanjaka hirika fanehoana an'ohatra. Dimy ny fivoaky ny marika manerana ny payline mandoa anao ho tsatòka fandresena ny hatramin'ny 7500 vola madinika koa.
ampielezo Bonus: Aliendor ny mpanjaka no mariky ny aelezo ity UK slots finday lalao. Rehefa telo na mihoatra izany famantarana tany izy nandritra ny kofehy ireny, ianao nahazo maimaim-poana folo spins. Rehetra mandritra ny winnings spins ireo dia avo telo heny.
Amin'ny mahatalanjona sary sy ny foto-kevitra mahatalanjona, izany UK slots finday lalao manome herintsaina fialam-boly. Misy valisoa be ny tombony azonao handresy koa.